NextMapping | Mustaqbalka Shaqada
Sidee NextMapping™ wuxuu abuuraa mustaqbalka shaqada
NextMapping ™ wuxuu diiradda saarayaa labadaba mustaqbalka shaqada iyo sidoo kale tallaabooyinka xiga ee degdega ah. Macaamiisheenna qiimaha badan ayaa u adeegsada istaraatiijiyadda usbuuca soo socda, sanadka soo socda, ama tobanka sano ee soo socda.
Nidaamkayaga NextMapping ™ wuxuu bixiyaa macnaha guud si looga caawiyo macaamiisha inay gaaraan horumarro cajiib ah iyo sidoo kale isbedel waara oo goobta shaqada looga baahan yahay inay mustaqbalka diyaar u ahaadaan.
NextMapping ™ waa mustaqbal u gaar ah oo gaar u ah qaabka go'aan shaqo ee abuuraya cadcad oo ay weheliso tillaabooyin la qaadi karo oo loogu talagalay saameynta sahaminta lama-filaanka ah ee mustaqbalka iyo muddada dheer loogu talagalay macaamiisha / shaqaalaha iyo ugu dambayn adduunka.
Waa maxay NextMapping™ geedi socodka?
Ganacsi kastaa wuxuu leeyahay caqabado iyo fursado u gaar ah.
Si loogu habeeyo loona naqshadeeyo NextMapping™ adiga, marka hore waxaan kugula xiriiri doonnaa adiga iyo kooxdaada - oo waxaan sameyn doonnaa baaritaankeena hordhaca ah - si loo dhiso fahamka 'xaaladaada hada'.
Caqabadda guud ee hoggaamiyeyaasha iyo kooxaha ayaa ah inay ganacsigooda ku arkaan hal muraayad ama aragti. Si loo sameeyo aragti guud oo dhameystiran, waxaan qaddarinaynaa oo aan dib-ugu-soo bandhigi doonnaa adiga iyo kooxdaada ururkiinna - laga bilaabo 'aragtiyo badan' mustaqbalka shaqada.
Iyada oo la adeegsanayo faham guud oo ururka ah, waxaan hada weydiin karnaa, “Sidee bay khariidadda u tahay muuqaalka mustaqbalka?” Dhismaha labada isbeddel ee soo ifbaxaya iyo mustaqbalka ee lagu taageerayo xogta cilmibaadhista waxaan ku siinaynaa macnaha sida ay noqonayso mustaqbal diyaar ah hadda.
Annaga oo ku qalabeysan qaab guud ahaaneed mustaqbalka shaqada, waxaan hadda soo aruurineynaa jawaabtaada. Iyada oo loo marayo codbixinta tooska ah, wareysiyada iyo wada sheekaysiga waxaan qiimeyneynaa xogta laga soo aruuriyay adiga iyo kooxdaada waxaanan dib u mideyneynaa celceliska jawaab celinta.
Kadib markaan qabsanay barashada iyo fikradaha sahaminta, waxaan iska indhatirnaa macnaha ay u leedahay ururkaaga. Waxaan isku xirnaa dhibcaha, si cad u qeexeysa aragti iyo khariiddadaada sida mustaqbalka shaqadu u ekaan karto ganacsigaaga.
Waxaan abuurnay mustaqbalkaaga khariidada shaqada - hadda waa waqtigii la hirgelin lahaa. Marxaladda ugu dambeysa ee NextMapping™ waa in lagu muujiyo tillaabooyinka la qaadi karo ee looga baahan yahay ururkaaga si loo muujiyo himiladan xaqiiqda.